प्रधानमन्त्री ओलीले गरे सार्वजनिक रुपमै पार्टी फुटेको घोषणा : आफ्नो भाग लिएर जान प्रचण्डलाई आदेश, पूर्व एमालेको सम्पत्तीमा आँखा नलाउन नेपाललाई चुनौती « Niatra TV
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे सार्वजनिक रुपमै पार्टी फुटेको घोषणा : आफ्नो भाग लिएर जान प्रचण्डलाई आदेश, पूर्व एमालेको सम्पत्तीमा आँखा नलाउन नेपाललाई चुनौती
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमा नेकपा फुटेको घोषणा गरिदिएका छन् । उनले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो भाग लिएर जजान उर्दी जारी गरेका छन् । त्यस्तै माधव नेपाल पनि अर्को पार्टीमा गएका कारण पूर्व एमालेको सम्पत्तीमा आँखा नलाउन चेतावनी दिएका छन् ।
उनले प्रचण्ड र आफुले पार्टी एक गर्न कोशिष गरेको भए पनि त्यो सफल नभएको बताएका छन् । एक टेलिभिजन च्यानलमा अन्तरवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन भएको स्वीकार गरेका हुन् । उनले विभाजन पछि पनि आफुसंग विशाल जनमत रहेको दावी गरेका छन् । समानान्तर बैठकमा प्रचण्डतिर धेरै सदस्य देखिएपनि उनीहरुसंग जनमत नभएको ओलीको दावी छ । उनले त्यसलाई सोलीको संज्ञा दिएका छन् ।
टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै ओलीले भने, ‘उहाँले ९९ मा पुगेको ठान्नु भो र १०० मा पुगेको भनेर यस्तो हतार गर्नुभयो । तर, लुडो खेलेजस्तो दुईमा झर्नुभयो’, ओलीले बुधबार राति एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, ‘म धेरै बहस गर्न चाहन्न उहाँहरु चुनावमा जान यति घबराउनु भएको किन ?
यति आत्तिनु भएको किन ? चुनाव हुनुहुँदैन भनेर किन भन्नुभयो ? जनतासँग यस्तो त्रास किन ? किनभने दुईमा झर्ने उहाँहरुले देख्नुभएको छ ।’ उनले थपे, ‘माथि उहाँहरुको संख्या होला तल ग्राउण्डमा छैन । मसँग सोली घोप्ट्याएजस्तो छ, टुप्पामा थोरै तल विशाल । हेर्नुहोला नेपाली जनताले कसरी फैसला गर्छन् ।’
ओलीले पूर्व माओवादीको सम्पत्ती र पार्टी कार्यालयमा आफुले दावी नगर्ने भएकाले प्रचण्डलाई पनि आफ्नो भाग लिएर जान भनेका छन् । प्रचण्डजीले उहाँहरुको पार्टी कार्यालयको सम्पत्ति लिएर जानुहुन्छ’, ओलीले भने, ‘पेरिसडाँडाको सम्पत्तिको हकदावी म गर्दिनँ ।’ प्रचण्डको कार्यकर्ता भइसकेपछि पूर्व एमालेको सम्पत्तिमा माधव नेपालले दाबी गर्न पनि मिल्दैन ।